टीटीडीसीमा सामूहिक नेतृत्व सुरु भएका छः गीता गुरुङ
काठमाण्डौ । ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ कार्यसमितिले कार्यसञ्चालन थालेको ४ महिना पुरा हुने क्रममा छ । गत जेठ २५ गते भएको निर्वाचनमा अध्यक्षमा प्रकाशनरसिंह राणाले ३३३ मत ल्याएर बिजयी भए भने ३ उपाध्यक्ष, महासचिव र ७ कार्यसमिती सदस्य राणा समुहबाटै निर्वाचित भएयता टीडीडिसीमा राणा समुहको पदाधिकारी र सदस्य दुबै समुहमा सुबिधाजनक बहुमतको स्थतिमा रहेका छन् ।
पछिल्लो एक दशकको कार्यकाललाई हेर्ने हो भने पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य ठमेल सुधारको एजेण्डाका कार्यन्वयनका लागि स्थापित भनिएको टीटीडीसीको गतिशिलता भन्दा बढि उल्झनमा बितेको प्रष्ट छ । पछिल्ला तिन कार्यकाल त झनै निरासाको स्थति देखियो । रामशरण थपलियाले दुईकार्यकाल नेतृत्व गरेपश्चात तेस्रो बर्षका लागि बिधान संसोधनको तयारी गर्दैगर्दा तत्कालिन उपाध्यक्ष समिर गुरुङले टीटीडीसीको नेतृत्व हत्याए । यद्यपी उनको कार्यकाल पनि गतिशिलता भन्दा बिरोधीहरुलाई पन्छाउनमै व्यस्त हुनुपर्यो । निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा हालै भएको निर्वाचनमा उनले पाएको ३६ भोट आफैमा दृष्टान्त हो । नेतृत्वका तिन दाबेदारबिचमा उनले पाएको भोट आफैमा उदेकलाग्दो छ ।
खयर, अहिले प्रकाशनरसिंह राणा बहुमत पदाधिकारी सहित टीटीडीसीको नेतृत्व गरीरहेका छन भने पछिल्लो निरन्तर तिन कार्यकाल ठमेलको उपाध्यक्ष रहेकी गीता गुरुङ अहिले राणा प्यानलमा पदाधिकारीमध्येबाट सर्बाधिक मत (३२५) ल्याएर बरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भईन । नेतृत्वले बिभिन्न खाले उल्झनको सामना गरिरहनुपरेपनि गुरुङको लोकप्रियता घटेको छैन, बरु बढेकै छ । नेतृत्व फेरिएपनि गुरुङको पदाधिकारी पद सुनिश्चीत देखिरहनुका पछाडी आम ठमेलबासीको सद्भाब उनीमाथि जिबितै रहेको प्रष्ट छ ।
टीटीडीसीमा उनको निरन्तरको उपस्थीति र बर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली तथा यसभित्र उनको भुमिका कस्तो भनि हामीले सोधेका थियौँ ।
१. के गर्दैहुनुहुन्छ ?
नयाँकार्यसमितीमा निर्वाचीत भएर आएपश्चात परिषद्भित्र बिभिन्न बिभागहरु खडा गरिएका छन । व्यक्तिअनुसार कार्यबिभाजन तोकिएको छ । विश्व पर्यटन दिबस, अंग्रेजी नयाँ बर्ष लगायतका ४ वटा कार्यक्रमको नेतृत्व म आफैले गर्दैछु । अघिल्लो कार्यसमितिमा सामुहिक जिम्मेवारीको कुरा हुन्थ्यो, खासै कोही पनि गम्भिर भएर लाग्नुनपर्ने स्थीति थियो भने अहिले आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै लागेका छौ । यसअर्थमा ठमेलको बिकास र संस्कृति जोगाउन लागीपरेको छु ।
२. तपाई पछिल्लो तिन कार्यकालयता पदाधिकारीका रुपमा रहीसक्नुभएको छ, नेतृत्व लिने बेला भएन ?
तपाईले भनेको ठिकै हो, म आफैलाई पनि महशुस भएको कुरा हो यो । यद्यपी अनुभव हासिल गर्नु पनी आवश्यक नै छ । अब आउने निर्वाचनमा चै यसबारेमा सोच्छु ।
३. दुईबर्षपछि तपाईलाई अध्यक्षका रुपमा देख्न पाईन्छ हो ?
सबैसँग सरसल्लाह गर्दा उहाँहरुले साथ दिनुभयो भने २ बर्षपछि अवश्यपनि पाउनुहुनेछ ।
४. बर्तमान अध्यक्ष राणाको कार्यशैली चै कस्तो पाउनुभाछ ?
एकदमै राम्रो छ । उहाँ ठमेलको घरधनी र व्यावसायी दुबै हो । सबैलाई कार्यबिभाजन गरिदिनुभएको छ, कसैले कसैको मुख ताकेर बस्नुपर्ने स्थीति छैन । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र केही गर्छु भन्नेलाई स्थीति सहज छ ।
५. तपाई आफै चै सफल की असफल ?
सफल नै अनुभुत हुन्छ । राम्रै काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ ।